You nwere ikike ịlụ di ma ọ bụ nwunye gị? Law & More na-enyere gị aka
Iwu ịgba alụkwaghịm » Onye Mmekọ Alimoni
Or nwere ma ọ bụ onye gị na ya bibu enwebeghị ego ị ga-eji na-ebi alụkwaghịm ahụ? Mgbe ahu onye ozo ibe ya nwere ugwo ikwuputa ego nke onye ya na ya bi na mbu.
Kedu mgbe ị ruru eru inweta onyinye ego n'aka onye bụbu onye mmekọ gị? Onwere, ị tozuru oke ịlụ ma ọ bụrụ na, mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ, ị ​​nweghị ego zuru oke iji kwado onwe gị.
Ọ DI MAKA INWETA AJ PMARA OTU?
Onye Mmekọ Alimoni
> Ọkwa nke alimoni di na nwunye
> Ntinye mmezi
> Inggbanwe alimoni
Kedu mgbe ị ruru eru inweta onyinye ego n'aka onye bụbu onye mmekọ gị?
Onwere, ị tozuru oke ịlụ ma ọ bụrụ na, mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ, ị ​​nweghị ego zuru oke iji kwado onwe gị. A ga-atụle iwu obibi gị n'oge alụmdi na nwunye iji chọpụta ma ị tozuru oke ịlụ di na nwunye. Na omume, otu n'ime ndị mmekọ ga-anata ikike inye onyinye. N'ọtụtụ oge nke a bụ nwanyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ ya kpatara ọtụtụ ọrụ lekọta ụlọ na ụmụaka. N'okwu ahụ, nwanyị anaghị enwe ego ma ọ bụ obere ego iji na-arụ ọrụ nwa oge. N'ọnọdụ nke nwoke mezuru ọrụ 'di nke ụlọ' na nwanyị rụzuru ọrụ, nwoke ahụ nwere ike ikwu na ọ bụ di ma ọ bụ nwunye.
Divorcegba alụkwaghịm bụ oge siri ike. Anyị na-enyere gị aka na usoro niile
Ọkwa nke alimoni di na nwunye
Na oge ị ga-achọ, gị na onye gị na ya na-akpakọrịta nwere ike ikwenye na ego ole onye ọ bụla ga na-ahụ maka ibe ya. Ọ bụrụ n ’enweghị ike ibilite n’otu, otu n’ime ndị ọka iwu anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka. Ọ bụghị naanị na anyị nwere ike inyere gị aka na usoro mkparịta ụka ahụ, mana anyị nwekwara ike ikpebi ego nke onye inyeaka ego maka gị. Anyị na-eme nke a site na ịgbakọ mmezi.
Ọ bụghị naanị na onye ọka ikpe na-eleba anya na ọnọdụ ego nke onye na-akwụ ụgwọ mmezi ahụ, kamakwa ọnọdụ ego nke onye na-akwụ ụgwọ mmezi. Dabere na ọnọdụ abụọ ahụ, ụlọ ikpe ga-ekpebi ma onye ọ bụla n'ime gị tozuru inweta onyinye ya, ya bụrụ, ọ ga-akwụ ego alimoni ahụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịnwere ikike ịnwe mmezi onye ọ bụla, mana nkọwapụta ego nke onye gị na ya na-emebu na-egosi na ya enweghị ike ịkwụghachi ego ibe ya.
Ngụkọta oge mmezi bụ ihe siri ike nghọta ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ihe aga-elebara anya. Law & More ga-enwe obi ụtọ ịme ihe maka inye onyinye maka alimoni maka gị. .
Onu ego nke onye inyeaka ya gha enyere gi aka gha enyere gi aka gha enyere gi aka gha enyere gi ego alim. Iji chọpụta mkpa nke nnata ego nnabata ahụ, a na-echekwa ihe dị ka 60% nke ego ezumike ezinụlọ na -ebelata ego ụmụaka ọ bụla.
Eterchọpụta ike ego
A na-eme ngụkọ ikike iburu ibu maka ndị ọzọ. Ngụkọta oge na-ekpebi ma onye ahụ ga-akwụ ụgwọ maka nrụzi nwere ikike ego zuru ezu iji nwee ike ịkwụ ụgwọ ego ahụ. Iji kpebie ego nke onye kwesiri ịkwụ ụgwọ ego, a ga-ebu ụzọ kpebie ego ole ọ ga-enweta. Onye na-akwụ ego alimoni nwere ike buru ụzọ wepu ego dị iche iche n’ego a. Ndị a bụ ego dị ukwuu dị ka onye na-akwụ ụgwọ ego iji nweta ihe ọ ga-akpata.
Ibu ike ntụnyere
N'ikpeazụ, a ga-eme ntụle ikike iburu ibu. A na-eji ntụle a iji gbakọ ego ndozi nke ndị otu ha nwere nnwere onwe ego nha anya. E jiri oke nke onye na-akwụ ụgwọ mmezi tụnyere ogo onye ji ya ụgwọ mmezi. Echiche dị na nke a bụ na onye na-akwụ ụgwọ mmezi ahụ ekwesịghị ịnọ n'ọnọdụ ego ka mma karịa onye ji ya ụgwọ mmezi n'ihi ụgwọ mmezi ya.
Ga - achọ ịma ihe ga - akpata ọnọdụ ego gị mgbe alụkwaghịm gị gbara. Kpọtụrụ Law & More anyị nwere ike isoro gị rụọ ọrụ ka ịmata ego ole ị ga-akwụ ma ọ bụ nata.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkagbu ma ọ bụ ịgbanwe ego ikuziri gị, a ga-emerịrịrịrị ụlọ ikpe a. Anyị nwere ike itinye arịrịọ mgbanwe n'ụlọ ikpe maka gị. Courtlọ ikpe nwere ike ịgbanwe ego ibe ya, ya bụ, ịrị elu, ibelata ma ọ bụ tọọ efu. Dika iwu si di, aghagh igbanwe 'mgbanwe onodu'. Ọ bụrụ na ụlọ ikpe achọpụta na ọnọdụ adịghị agbanwe agbanwe, agaghị enye gị arịrịọ gị. Agabataghị nkọwa a na iwu, yabụ, ọ nwere ike ịchekwa ọnọdụ dị iche iche. Na omume, nke a na-emetụtakarị mgbanwe n'ọnọdụ ọnọdụ ego nke otu ndị ọrụ mmekọ mbụ.
Nchupu nke onye inyeaka alimoni
Inye oru nke ikuziri ego nke di na nwunye nwere ike kwusi na onodu ndi a:
• n'ihe banyere ọnwụ ma ọ bụ di gị nwụrụ anwụ;
• ọ bụrụ na oge kacha mma nke ụlọ ikpe kpebisiri ike agwụla;
• ọ bụrụ na onye ahụ enwetara ọlụ ọzọ, abanyekwa na ndenye aha ma ọ bụ bikọrị ọnụ;
• ọ bụrụ na ọnọdụ ego agbanweela ma onye ahụ na-enweta ego nwere ike ịkwụ ụgwọ maka onwe ya